Maalinta Calanka Soomaaliya 12-ka October (Maqaal) – Radio Muqdisho
Maalinta Calanka Soomaaliya 12-ka October (Maqaal)
Maantoo kale 12-kii October sanadkii 1954-tii ayeey aheyd markii ugu horreeysay ee la saaray Calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, hasa yeeshee Calanka Buluugga ah ee u eg samada xiddigta Shan geesoodka ahna ku leh bartamaha waa Calanka kaliya ee loo aqoonsanyahay Jamhuuriyadda Federalka Somalia.
Haddaba isla sanadkaasi 1954 waxaa loo baahday in la helo Calan uu yeesho dalkeenna mar haddi la helay nidaamki xornimo gaarsiinta, waxaa la soo bandhigay naqshado farabadan hase yeeshee isla sanadkaasi 12 Obtober 1954-tii maantoo kale Allaha u naxariistee Maxamed Cawaale Liibaan oo ka tirsanaa golaha dhexe ee xisbiga Leegada ayaa jeebkiisa ka soo bixyay Calanka hadda jira ee buluugga ah.
Calankan Buluugga ah ee xiddigta ku leh bartamaha ayaa ah kan caalamka oo dhan noo aqoonsanyahay, waana mid sharaf iyo maamuus ku leh qof kasta oo muwaadin Soomaali ah, waxaana loo soo maray halgan adag oo dhiig badan ku daatay, qiimaha, ixtiraamka, karaamada iyo jaceylka ay u qabaan ummadda Soomaaliyeed Calankeenna suubban darteed markii la garaaco Musigga astaanta u ah Calanka dadkoo dhan wey sara kacaan iyagoo taagnaada ilaa uu dhamaado muusigga astaantaCalanka.
Hase yeeshee waxaa arrintaasi ka dhiidhiyay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibad, iyadoo malleeshiyaadkii shabaab ee doonayay in ay calan madow ku bedelaan calnkeenna sharafta leh laga saaray, inta badan gobollada dalka, iyadoo haatan uu Calankeennu ka dulbabanayo Muqdisho iyo dhammaan gobollada dalkeenna marka laga reebo meelaha kooban oo ay wali dalka ugu harsanyihiin kooxda UGUS.
Waa wax lagu farxo in xuska maalinta calanka ee sanadkan uu ku soo aadayo iyadoo dowladda Federaalka Soomaaliya ay dib u dayactir ku sameeysay taallooyinkii iyo xarumihii lagu xusuusan jiray calanka iyo madaxbanaanida dalka, taasoo qeyb ka ah qorshaha dowladda ee ku saleysan sare u qaadidda qiimaha calanka iyo qaranimada dalka, iyadoo ay intaasi dhinac socdaan barnaamijyo wacyigelin ah oo ummadda lagu xusuusinayo taariikhda calanka, xorriyadda iyo halgankii adkaa ee loo soo maray.
Sidoo kale sanadguurada 65-aad ee ka soo wareegtay maalinta calanka ayaa ku soo beegmeeysa xilli dowladda Federaalka Soomaaliya ay guulo waaweyn ka gaartay la dagaallanka argagixisada, adkeynta ammaanka, iyo hirgelinta nidaamka dowladnimada, iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay aad ula dhaceen hannaanka maamul ee dowladda iminka jirta ee nabad iyo nolol.
W/D Mowliid Maxamed Sabriye